LEGO Cyber ​​Monday သည် ၂၀၂၁ တွင်သဘောတူညီသည်။ Brick Fanatics
အဆိုပါနှစ်ပတ်လည် Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ စျေးဝယ် bonanza သည်ကျွန်ုပ်တို့အနီးတွင်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုနှစ်မှ မျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာများကို ကြိုမျှော်နေသဖြင့် နောက်ပိုင်းကို အာရုံစိုက်ပါ။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ Lego အပေးအယူ။ ဒါပေမယ့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ကဒီမှာဘာ့ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာလဲလို့မေးရကျိုးနပ်ပါတယ် Brick Fanaticsအကောင်းဆုံးကိုရရှိရန် သေချာစေရန် သင့်ပြက္ခဒိန်တွင် မည်သည့်ရက်စွဲကို ထည့်သွင်းရန် လိုအပ်သနည်း။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ Lego အပေးအယူ။
နောက်ဆုံးထွက် LEGO Cyber ​​Monday စျေးနှုန်းများ – အားလုံး
ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးပေါ်နှင့် အကောင်းဆုံးအရာအားလုံးကို ခြေရာခံပါမည်။ Lego ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိ ပေးချေမှုများ၊ ထို့ကြောင့် သင်လက်လွတ်မခံကြောင်း သေချာစေရန် ပုံမှန်ပြန်ကြည့်ပါ။ ဤသည်မှာ စီစဥ်ထားသည့်အရာအားလုံး၏ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။ Lego အဖွဲ့၊ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လက်လီရောင်းချသူများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးခြား partners ။
Last updated: နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၁၇း၁၃ ဗြိတိန်စံတော်ချိန်
Lego Zavvi ကုန်ဆိုင်Disney Blocks မဂ္ဂဇင်း iDisplayit
ငါ့အုတ်များကိုလင်းစေပါ FireStar ကစားစရာများ Nintendo အလင်းရောင် နောက်ထပ်
LEGO Cyber ​​Monday အရောင်းအ၀ယ်များ
အဆိုပါ Lego Group သည် ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ လျှော့စျေးများနှင့် သီးသန့်လက်ဆောင်များကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ 2021:
£200 / $200 / €200 အွန်လိုင်းနှင့်စတိုးဆိုင်တွင်သုံးပါ အခမဲ့ Fleece စောင်
40483 Luke Skywalker's Lightsaber ဖြင့် အခမဲ့ 75313 ကို AT-AT အွန်လိုင်းနှင့် စတိုးဆိုင်အတွင်း
အွန်လိုင်းနှင့် စတိုးဆိုင်တွင် £40484 / $170 / €170 ဖြင့် 170 Santa's Front Yard အခမဲ့
£30576 / $40 / €40 စတိုးဆိုင်တွင်သုံးသော 40 အားလပ်ရက်သစ်ပင် အခမဲ့
ရွေးချယ်ထားသော အရောင်း Lego အစုံ
အထူးလျှော့စျေး VIP ဆုလက်ဆောင်ဘောက်ချာများ
Bonsai Tree VIP ဆုကြေးငွေ
VIP အမှတ် 1,000,000 ထီပေါက်ခြင်း။
အစုံများစွာကိုလည်း လောလောဆယ် လျှော့ပေးထားပါသည်-
40421 Belle အောက်, ကီဗင်နှင့် Bob - ယခု£ 17.99, £ 14.39 ဖြစ်ခဲ့သည်
40481 Cockatiel - ယခု£ 13.49, £ 10.79 ဖြစ်ခဲ့သည်
40482 Hamster - £13.49 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု 10.79 ဖြစ်သည်။
40386 Batman - ယခု£ 14.99, £ 11.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၅၁၈၇ BB-40431 - ယခု£ 14.99, £ 11.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
40391 ပထမ ဦး ဆုံးအမိန့် Stormtrooper - ယခု£ 14.99, £ 11.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
40428 အဆိုပါ Joker - ယခု£ 14.99, £ 11.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
60271 ပင်မရင်ပြင် - ယခု£ 169.99, £ 135.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
လူကြီးများအတွက် Lego UK
41918 စွန့်စားမှုလက်ကောက် - ယခု£ 5.99, £ 4.79 ဖြစ်ခဲ့သည်
41928 Bag Tag Narwhal - ယခု£ 5.99, £ 4.79 ဖြစ်ခဲ့သည်
41930 Bag Tag ပန်ဒါ - ယခု£ 5.99, £ 4.79 ဖြစ်ခဲ့သည်
41922 Cool Cactus လက်ကောက် - ယခု£ 5.99, £ 4.79 ဖြစ်ခဲ့သည်
41933 ဂီတလက်ကောက် - ယခု£ 5.99, £ 4.79 ဖြစ်ခဲ့သည်
41927 Bag Tag ခွေး - ယခု£ 5.99, £ 4.79 ဖြစ်ခဲ့သည်
71380 သင်၏စွန့်စားမှုပြုလုပ်သူ Set ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ - ယခု£ 49.99, £ 39.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
71365 Piranha Plant Power Slide တိုးချဲ့ရန်သတ်မှတ်မည် - ယခု£ 24.99, £ 19.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
43185 Boun ရဲ့လှေ - ယခု£ 44.99, £ 35.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
43107 HipHop စက်ရုပ် BeatBox - ယခု£ 17.99, £ 14.39 ဖြစ်ခဲ့သည်
43106 ကြံ့ DJ BeatBox - ယခု£ 17.99, £ 14.39 ဖြစ်ခဲ့သည်
43105 P ကိုarty က Llama BeatBox - ယခု£ 17.99, £ 14.39 ဖြစ်ခဲ့သည်
43104 ဂြိုလ်သား DJ သမား BeatBox - ယခု£ 17.99, £ 14.39 ဖြစ်ခဲ့သည်
43103 ပန့်ခ် Pirate BeatBox - ယခု£ 17.99, £ 14.39 ဖြစ်ခဲ့သည်
43102 Candy မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း BeatBox - ယခု£ 17.99, £ 14.39 ဖြစ်ခဲ့သည်
၄၃၁၀၈ Bandmates - ယခု£ 3.99, £ 3.19 ဖြစ်ခဲ့သည်
45507 EV3 Touch Sensor – £15.99 ဖြစ်ပြီး ယခု £12.79
40479 Dalmatian - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
40440 ဂျာမန်သိုးထိန်း - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
40421 Belle အောက်, ကီဗင်နှင့် Bob - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
40481 Cockatiel - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
40472 Monkie KidRC Racer ပါ။ - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
40381 မျောက်ဘုရင် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
လူကြီးများအတွက် Lego US
DC ရုပ်ပြ US
76157 Weter Woman vs Cheetah - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
43104 ဂြိုလ်သား DJ သမား Beatbox - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
43102 Candy မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း Beatbox - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
43107 HipHop စက်ရုပ် Beatbox - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
43105 P ကိုarty က Llama Beatbox - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
43103 ပန့်ခ် Pirate BeatBox - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
43106 ကြံ့ DJ BeatBox - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
US ကို Minifigures များ
40344 MF Set - နွေရာသီပွဲတော် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
40372 ရဲတပ်ဖွဲ့ MF ဆက်စပ်ပစ္စည်းသတ်မှတ်မည် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
40373 ပွဲခင်း MF ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံ - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
40418 Falcon နှင့် Black Widow အဖွဲ့ဖွဲ့ - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
၇၆၃၈၆ Hogwartကျောင်းသားများဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံ - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
854011 Eiffell Tower Magnet Build - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
854088 တားမြစ်ထား City သံလိုက်တည်ဆောက်ခြင်း - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
853914 London Bus Magnet Build - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
854012 လန်ဒန်သံလိုက် Build - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
853989 ပွဲအိတ် Charm - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
853912 LEGO အုတ်ရေခဲပြင် Lollipop ဗန်း - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
၈၅၃၉၅၅ Aurora Key Chain - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
854066 မွေးနေ့ Guy Key Chain - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
854004 ဌာနခွဲ Key Chain - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
853995 Crayon Girl သော့ချိတ် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
854041 Happy Helper Elf Key Chain - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
854040 မင်္ဂလာ Santa Key ကို Chain - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
853451 Chewbacca သော့ချိတ် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
853969 Anna Key Chain - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
853997 လွိုက် Key ကိုချည်နှောင် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft UK၊ US နှင့် Europe ဆိုဒ်များတွင် သုံးဆ VIP အမှတ်များဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။
Zavvi Cyber ​​Monday အပေးအယူများ
Zavvi လက်ရှိတွင် များစွာသော လျှော့စျေးများကိုလည်း ပေးဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ Lego UK၊ US နှင့် Australia တို့တွင် themes များ။
၇၅၃၀၈ R75308-D2 - ယခု£ 179.99, £ 139.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
75288 ကို AT-AT - ယခု£ 139.99, £ 99.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
75318 အဆိုပါကလေး - ယခု£ 69.99, £ 48.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42083 Bugatti Chiron - ယခု£ 329.99, £ 214.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၄၂၁၁၀ Land Rover Defender - ယခု£ 159.99, £ 99.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42115 Lamborghini Sián FKP ၃၇ - ယခု£ 349.99, £ 218.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
420994×4X-treme Off-Roader ဖြစ်သည် - ယခု£ 199.99, £ 134.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42100 Liebherr R ကို 9800 - ယခု£ 399.99, £ 279.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၄၂၁၂၅ Ferrari 42125 GTE“ AF Corse # 488” - ယခု£ 169.99, £ 114.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42096 Porsche 911 RSR – £139.99 ၊ ယခု £99.99
42124 Off- လမ်း Buggy - ယခု£ 119.99, £ 89.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42095 အဝေးထိန်း-ထိန်းချုပ်နိုင်သောစတင့်ပြိုင်သူ - ယခု£ 69.99, £ 49.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
421294×4Mercedes-Benz Zetros စမ်းသပ်ထရပ်ကား - ယခု£ 274.99, £ 199.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42111 Dom ရဲ့ Dodge အားသွင်း - ယခု£ 89.99, £ 59.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
421146×6Volvo Artသိမ်းထားသော Hauler - ယခု£ 229.99, £ 159.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42126 Ford ကား Raptor - ယခု£ 129.99, £ 94.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42131 ကြောင်® D11T ဘူဒိုဇာ – £419.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု £329.99 ဖြစ်သည်။
၇၅၉၇၉ Hedwig - ယခု£ 34.99, £ 23.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၆၃၈၆ Hogwarts အမြန် - ယခု£ 74.99, £ 54.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၆၃၈၆ Hogwarts နာရီမျှော်စင် - ယခု£ 84.99, £ 59.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၆၃၈၆ Hogwarts နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင် - ယခု£ 89.99, £ 59.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၆၃၈၆ Hogwarts Potions အတန်း - ယခု£ 27.99, £ 19.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို - ယခု£ 49.99, £ 32.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
71391 Bowser's Airship Expansion - ယခု£ 89.99, £ 62.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
71368 ဘားပြုပ်ရဲ့ဘဏ္asureာကို Hunt - ယခု£ 74.99, £ 47.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၁၃၉၀ Reznor Knockdown - ယခု£ 64.99, £ 46.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
71365 Piranha Plant Power Slide တိုးချဲ့ရန်သတ်မှတ်မည် - ယခု£ 24.99, £ 17.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
60292 မြို့စင်တာ - ယခု£ 89.99, £ 59.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
76193 အဆိုပါအုပ်ထိန်းသူများ '' သင်္ဘော - ယခု£ 134.99, £ 94.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
76240 Batmobile Tumbler - ယခု£ 209.99, £ 179.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
76941 Carnotaurus ဒိုင်နိုဆော Chase - ယခု£ 44.99, £ 39.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
71748 Catamaran ပင်လယ်စစ်တိုက် - ယခု£ 59.99, £ 36.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
11013 ကို Creative Transparent အုတ် - ယခု£ 27.99, £ 18.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
75547 Minions လေ့ကျင့်ရေးအတွက်ရှေ့ပြေး - ပေါင် ၈၉.၉၉၊ ယခု£ ၆၉.၉၉ ဖြစ်သည်
75550 ကွန်ဖူးတိုက်ပွဲ - ယခု£ 34.99, £ 24.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
Nian ၏ 80106 ပုံပြင် - ယခု£ 59.99, £ 49.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
70430 Newbury မြေအောက်ရထား - ယခု£ 24.99, £ 9.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41682 သူartအင်းအိုင် City ကြောငျး - ယခု£ 59.99, £ 39.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41683 Forest Horseback Riding Center သတ်မှတ် - ယခု£ 59.99, £ 42.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
75286 အထွေထွေ Grievous ရဲ့ Starfighter - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
၇၅၃၀၈ R75308-D2 - $199.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု $174.99 + ကုဒ်ဖြင့် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ LEGOSW
75315 Imperial အလင်း Cruiser – ကုဒ်ဖြင့် $159.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု $134.99 ဖြစ်သည်။ ခရစ္စတီယာနို
10258 လန်ဒန်ဘတ်စ်ကား - $139.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု $99.99 + ကုဒ်ဖြင့် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ LDNBUS
10262 ဂျိမ်းစ်ဘွန်း Aston M ကartDB5 ၌တည်၏ - $149.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု $124.99 + ကုဒ်ဖြင့် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ DB5
10295 Porsche 911 - $149.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု $114.99 + ကုဒ်ဖြင့် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ Porsche
42115 Lamborghini Sián FKP ၃၇ - $379.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု $289.99 + ကုဒ်ဖြင့် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ LAMBO
X-treme Off-Roader ၄ စီး - မှာ $249.99၊ $164.99 + ကုဒ်ဖြင့် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ 4X4TRUC
42100 Liebherr R ကို 9800 တူးဖော် - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
၄၂၁၁၀ Land Rover Defender - ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ၊ ယခု ၈၉.၉၉ ဒေါ်လာ
၄၂၁၂၅ Ferrari 42125 GTE“ AF Corse # 488” - $169.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု $139.99 + ကုဒ်ဖြင့် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ Ferrari
42131 Cat® D11T ဘူဒိုဇာ - $449.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု $379.99 + ကုဒ်ဖြင့် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ဘူဒိုဇာ
21054 အိမ်ဖြူတော် - $99.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု $82.99 + ကုဒ်ဖြင့် အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ အိမ်ဖြူတော်
၇၅၃၀၈ R75308-D2 - သည် A$329.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$254.99 ဖြစ်သည်။
75315 Imperial အလင်း Cruiser - သည် A$269.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$219.99 ဖြစ်သည်။
၄၂၁၁၀ Land Rover Defender - သည် A$329.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$219.99 ဖြစ်သည်။
42100 Liebherr R ကို 9800 တူးဖော် - သည် A$749.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$529.99 ဖြစ်သည်။
42115 Lamborghini Sián FKP ၃၇ - A$569.99၊ ယခု A$469.99
420994×4X-treme Off-Roader ဖြစ်သည် - သည် A$379.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$269.99 ဖြစ်သည်။
၄၂၁၂၅ Ferrari 42125 GTE“ AF Corse # 488” - သည် A$299.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$239.99 ဖြစ်သည်။
42096 Porsche 911 RSR - သည် A$249.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$189.99 ဖြစ်သည်။
421294×4Mercedes-Benz Zetros စမ်းသပ်ထရပ်ကား - သည် A$499.99 ဖြစ်ပြီး ယခု A$379.99 ဖြစ်သည်။
ကုန်ဆိုင်Disney Cyber ​​Monday အပေးအယူ
ကုန်ဆိုင်Disney UK သည် အမျိုးမျိုးသော လျှော့စျေးများကို ပေးသည်။ Star Wars နှင့် Disney အစုံ။
75318 အဆိုပါကလေး - ယခု£ 69.99, £ 55.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
75252 မှာ Imperial စတား Destroyer - ယခု£ 649.99, £ 519.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
43197 အဆိုပါရေခဲပြင်ရဲတိုက် - ယခု£ 199.99, £ 159.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
43179 Mickey နှင့် Minnie ပုံများ - ယခု£ 169.99, £ 134.99 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
Nintendo Cyber ​​Monday သဘောတူညီချက်များ
ကျွန်ုပ်၏ Nintendo Store သည် ရောင်းချနေပါသည်။ 71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ် သိသိသာသာလျှော့စျေးမှာ။
71374 Nintendo ဖျော်ဖြေရေးစနစ် - ယခု£ 209.99, £ 167.20 ဖြစ်ခဲ့သည် -သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည်-
Blocks မဂ္ဂဇင်း Cyber ​​Monday စျေးနှုန်းများ
နှစ်နှစ်စာရင်းသွင်းမှုဖြင့် အခမဲ့တီရှပ်နှင့် ရုပ်ပုံအသေးစားကို အမှတ်ရရန် ကုဒ် BFT/F ကို အသုံးပြုပါ။ Blocks မဂ္ဂဇင်း on ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့. အခမဲ့၊ ကျပန်းရွေးချယ်ထားသော နောက်ကျောစာစောင်ကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး £1,000 ဖြင့် ဆုမဲပေါက်ခြင်းသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ Lego လက်ဆောင်ကဒ်။
iDisplayit Cyber ​​Monday အပေးအယူများ
အပေါ် 10% သိမ်းဆည်းပါ Lego Star Wars အမှုတွဲများကိုပြသပါ။ iDisplayit ဘို့ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ကုဒ်နှင့်အတူ BFSW10နှင့် £12/$99 နှင့်အထက် မှာယူမှုအားလုံးပါဝင်သည့် အခမဲ့ 135-အသေးစားပြကွက်ကို အိတ်ထဲထည့်ပါ။
Light My Bricks Cyber ​​Monday အပေးအယူများ
ငါ့အုတ်များကိုလင်းစေပါ'' Black ကသောကြာနေ့ အရောင်းအ၀ယ် ဆက်လုပ်နေပါသည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့25% လျှော့စျေးနှင့်အတူ ဆိုက်-တစ်ခွင် နှင့် နောက်ထပ် 5% လျှော့စျေးကို အသုံးပြုခြင်း။ Brick Fanatics'သီးသန့်ကုဒ် BF5.
FireStar Toys Cyber ​​Monday စျေးနှုန်းများ
ယခုမှစ၍ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့အရာအားလုံးမှာ 10% off ယူနိုင်ပါတယ်။ FireStar ကစားစရာများ ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးသန့်လျှော့စျေးကုဒ်ကို အသုံးပြုခြင်း။ BF10. ၎င်းတွင် အသစ်ထွက်ရှိထားသော Mystery Bags အပါအဝင် အရောင်းပစ္စည်းများအားလုံး ပါဝင်သည်။
အခြား LEGO Cyber ​​Monday စျေးများ
IWOOT တွင် ရရှိနိုင်သော အစုအဝေးများနှင့် လျှော့စျေးများစွာရှိသည်။
£10280 အတွက် ပန်းစည်း 10281 နှင့် Bonsai သစ်ပင် 68.99 တို့ကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးသည် ။
ပေါင် 20 တန် LEGO နှစ်လုံး (ကုဒ်ကိုသုံးပါ 2LEGO20 ငွေရှင်းချိန်တွင်)
75948 ဟယ်ရီပေါ်တာ Hogwartနာရီစင် & 75969 Hogwarts နက္ခတ္တဗေဒမျှော်စင် — £174.98 ဖြစ်သင့်သည်၊ ယခု £119.99 (ကုဒ်ကိုသုံးပါ။ မျှော်စင် ငွေရှင်းချိန်တွင်)
75979 Harry Potter Hedwig & 75955 Hogwarts အမြန် — £109.98 ဖြစ်သင့်သည်၊ ယခု £79.99 (ကုဒ်ကိုသုံးပါ။ HPLEGO ငွေရှင်းချိန်တွင်)
LEGO နှစ်ခုအတွက် သုံးခု
American IWOOT site သည် Ghostbusters ECTO-1 set အသစ်အတွက် လျှော့စျေးကိုလည်း ပေးပါသည်။
၁၀၂၇၄ Ghostbusters ECTO-10274 - အခမဲ့ ပို့ဆောင်ခ ဖြင့် $164.99 (ကုဒ် LEGOGB ကိုသုံးပါ)
Argos လျှော့စျေးများစွာကို ကြေငြာထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Lego အစုံ။ The အရုပ် ၂၀ ကုဒ်သည် ယနေ့အထိ ဤအတွဲများတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအချို့အတွက် အပို 20% လျှော့စျေးကိုလည်း ပေးပါသည်။
၄၂၁၂၅ Ferrari 42125 GTE“ AF Corse # 488” - ယခု£ 170.00, £ 113.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
60197 ခရီးသည်ရထား - ယခု£ 105.00, £ 65.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
76388 Hogsmeade ကျေးရွာသို့လာရောက်လည်ပတ် - ယခု£ 70.00, £ 46.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
၁၀၂၇၄ Ghostbusters ECTO-10274 - ယခု£ 180.00, £ 120.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
60283 အားလပ်ရက် camper ဗန် - ယခု£ 18.00, £ 12.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
41683 Forest Horse and Pony Riding Center - ယခု£ 60.00, £ 40.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ် - ယခု£ 35.00, £ 23.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
75304: Dartဇ Vader သံခမောက်လုံး - ယခု£ 60.00, £ 40.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet - ယခု£ 60.00, £ 40.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
60292 မြို့စင်တာ - ယခု£ 90.00, £ 60.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
10696 အလယ်အလတ် Creative အုတ် Box ကို - ယခု£ 25.00, £ 16.50 ဖြစ်ခဲ့သည်
41679 သစ်တောအိမ်သစ်ပင်အိမ် - ယခု£ 25.00, £ 16.50 ဖြစ်ခဲ့သည်
41684 သူartအင်းအိုင် City ဂရန်းဟိုတယ် - ယခု£ 90.00, £ 60.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
75257 ထောင်စုနှစ် Falcon - ယခု£ 150.00, £ 100.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
75312 Boba Fett ရဲ့ Starship - ယခု£ 45.00, £ 30.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
76187 အဆိပ် - ယခု£ 55.00, £ 36.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
၄၂၁၂၃ McLaren Senna GTR - ယခု£ 45.00, £ 27.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
Smyths Toys သည် အစုံလိုက်များအတွက် လျှော့စျေးများစွာရှိသည်။ Black ကသောကြာနေ့.
၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက် - ယခု£ 349.99, £ 299.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ် - ယခု£ 274.99, £ 234.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42115 Technic Lamborghini Sián FKP ၃၇ - £349.99၊ ယခု £249.99
၇၆၁၆၁ ၁၉၈၉ Batwing – £179.99 ဖြစ်ပြီး £149.99 ဖြစ်ခဲ့သည်။
10270 စာအုပ်ဆိုင် - ယခု£ 149.99, £ 124.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၄ ဈေးဝယ်စင်တာ - ယခု£ 89.99, £ 67.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
10698 ကြီးမားသောဖန်တီးမှုအုတ် Box ကို - ယခု£ 39.99, £ 31.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
76393 ဟယ်ရီပေါ်တာ & Hermione Granger - ယခု£ 119.99, £ 99.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား - ယခု£ 79.99, £ 49.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
10273 သရဲခြောက်တဲ့အိမ် - ယခု£ 209.99, £ 174.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၁၀၂၆၆ NASA NASA Apollo 10266 Lunar Lander - ယခု£ 84.99, £ 67.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း - ယခု£ 89.99, £ 71.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42126 Ford ကားက F-150 Raptor - ယခု£ 129.99, £ 99.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
77944 မီးသတ်စခန်း - ယခု£ 89.99, £ 71.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41693 Surfer ကမ်းခြေ - ယခု£ 59.99, £ 47.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
60292 Community Town Center - ယခု£ 89.99, £ 59.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
42129 4×4 Technic 4×4 Mercedes-Benz Zetros အစမ်းသုံးထရပ် - ယခု£ 274.99, £ 199.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
Ocado သည်များစွာသောလျှော့စျေးကိုကမ်းလှမ်းသည်။ Lego အစုံ။
11015 ကမ္ဘာတဝှမ်း - ယခု£ 45.00, £ 27.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
76390 ဟယ်ရီပေါ်တာပြက္ခဒိန် - ယခု£ 24.99, £ 17.49 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ - ယခု£ 34.99, £ 23.33 ဖြစ်ခဲ့သည်
41933 DOTS ဂီတလက်ကောက် - ယခု£ 5.99, £ 4.49 ဖြစ်ခဲ့သည်
41677 သစ်တောရေတံခွန် - ယခု£ 8.99, £ 6.74 ဖြစ်ခဲ့သည်
10954 နံပါတ်ရထား - ရေတွက်ရန် လေ့လာပါ။ - ယခု£ 14.99, £ 11.24 ဖြစ်ခဲ့သည်
10930 ဘူဒိုဇာ - ယခု£ 9.99, £ 8.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
41670 Stephanie ရဲ့ဘဲလေး Cube - ယခု£ 8.99, £ 8.09 ဖြစ်ခဲ့သည်
41671 Andrea ရဲ့ရေကူး Cube - ယခု£ 8.99, £ 8.09 ဖြစ်ခဲ့သည်
41668 မင်းသမီး Emma ရဲ့ဖက်ရှင် Cube - ယခု£ 8.99, £ 8.09 ဖြစ်ခဲ့သည်
41679 သစ်တောအိမ် - ယခု£ 24.99, £ 18.74 ဖြစ်ခဲ့သည်
41667 Olivia ၏ဂိမ်း Cube - ယခု£ 8.99, £ 8.09 ဖြစ်ခဲ့သည်
41669 Mia ၏ Soccer Cube - ယခု£ 8.99, £ 8.09 ဖြစ်ခဲ့သည်
71029 Minifigures စီးရီး 21 - ယခု£ 3.49, £ 2.79 ဖြစ်ခဲ့သည်
10940 Spider-Man ရုံးချုပ်artအဖွင် - ယခု£ 24.99, £ 18.74 ဖြစ်ခဲ့သည်
John Lewis သည် နှစ်လိုဖွယ်များစွာကို လျှော့ထားသည်။ Lego အစုံ။
41683 အပျော်စီးစင်တာ - ယခု£ 59.99, £ 38.24 ဖြစ်ခဲ့သည်
10289 ပရဒိသု၏ငှက် - ယခု£ 89.99, £ 60.29 ဖြစ်ခဲ့သည်
၇၅၂၉၀ Mos Eisley Cantina - ယခု£ 319.99, £ 255.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
21325 အလယ်ခေတ်ပန်းပဲဆရာ - ယခု£ 134.99, £ 107.99 ဖြစ်ခဲ့သည်
၁၉၆၉ Fiat 10271 (အဝါ) – £74.99 ဖြစ်ခဲ့သည်၊ ယခု £63.74 ဖြစ်သည်။
ASDA တွင် ယခုအချိန်တွင် လျှော့စျေး အနည်းငယ်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် £2.95 ပေးပို့ခရှိကြောင်း သတိရပါ။
76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A - ယခု£ 49.97, £ 37.47 ဖြစ်ခဲ့သည်
41681 Forest Camper Van & Sailboat - ယခု£ 44.97, £ 32.97 ဖြစ်ခဲ့သည်
41441 မြင်းသင်တန်းနှင့်နောက်တွဲယာဉ် - ယခု£ 24.97, £ 18.97 ဖြစ်ခဲ့သည်
Luigi နှင့်အတူ 71387 Adventures ကို - ယခု£ 49.97, £ 35.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
၄၂၁၂၂ Jeep Wrangler - ယခု£ 44.97, £ 34.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
75318 အဆိုပါကလေး - ယခု£ 69.97, £ 50.00 ဖြစ်ခဲ့သည်
42120 ကယ်ဆယ်ရေး Hovercraft - ယခု£ 29.97, £ 22.47 ဖြစ်ခဲ့သည်
41448 သူartအင်းအိုင် City ရုပ်ရှင်ပြဇာတ်ရုံ - ယခု£ 44.97, £ 30 ဖြစ်ခဲ့သည်
Sainsbury's သည် မကြာသေးမီက အတွဲအချို့ကို လျှော့ပေးထားသည်။
21172 အဆိုပါပျက်စီး Portal - ယခု£ 28.00, £ 18.48 ဖြစ်ခဲ့သည်
75280 501st Legion Clone Troopers များ - ယခု£ 25.00, £ 16.50 ဖြစ်ခဲ့သည်
41679 သစ်တောအိမ် - ယခု£ 25.00, £ 16.50 ဖြစ်ခဲ့သည်
Tatooine အပေါ် 75299 ပြTroနာ - ယခု£ 28.00, £ 18.48 ဖြစ်ခဲ့သည်
အတွဲအချို့ကို £2 ဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 15 ခုတွင်လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
76140 သံက Man Mech - £ 9.00
75267 Mandalorian တိုက်ပွဲ Pack ကို - £ 13.00
41442 VET ဆေးခန်းကယ်ဆယ်ရေး Buggy - £ 9.00
Cyber ​​Monday ဆိုတာဘာလဲ။
အတော်လေးရိုးရှင်းစွာ, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ တစ်နှစ်တာ၏ အကြီးဆုံး အွန်လိုင်းစျေးဝယ်နေ့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ American Thanksgiving ပြီးနောက် တနင်္လာနေ့တွင် ၎င်းသည် e-commerce ကိုအာရုံစိုက်မည့်အစား လာပါသည်။ Black ကသောကြာနေ့ဆိုင်တွင်းဝယ်ယူမှုများကို အစဉ်အလာအားဖြင့် အာရုံစိုက်သည်။ ဒါဟာ သင်စဉ်းစားတဲ့အခါ အဓိကကွာခြားချက်ပါပဲ။ Black ကသောကြာနေ့ vs ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုသည် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် စျေးဝယ်ခြင်းများနှင့် လျှော့စျေးများ ပိတ်ရက်ရှည်တစ်ခုဖြစ်လာစေရန် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ တကယ်တော့, Black ကသောကြာနေ့-ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ အချို့သော ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့် လျှော့စျေးများသည် နိုဝင်ဘာလတစ်ခုလုံးတွင် ရရှိနိုင်သော ကမ်းလှမ်းမှုများဖြင့် ပိတ်ရက်ထက် ပိုကြာလေ့ရှိပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ၏ စတုတ္ထမြောက် ကြာသပတေးနေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနှင့်အတူ၊ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ဒီနောက် တစ်ပတ်မှာလည်း ရောက်ပါတယ်။ ရွှေတောင်၊ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ 2021 ခုနှစ်၏ရက်စွဲသည် တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာ 29 တွင်ကျရောက်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝမဝေးပါ၊ ထို့ကြောင့်စတင်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။art 2021 အမျိုးအစားကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ Lego ငါတို့မျှော်လင့်နိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေ။
Cyber ​​Monday LEGO ရောင်းမည်
LEGO.com အများအားဖြင့် ကြီးကျယ်သော လျှော့စျေးများဖြင့် ပြည့်ကျပ်နေပါသည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ စျေးနှုန်းချိုသာသော သို့မဟုတ် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော မက်လုံးများဖြင့် ရရှိနိုင်သော မတူညီသော စုဆောင်းမှုများနှင့် အစုံများစွာဖြင့် ရောင်းချခြင်း။ သင်ထည့်ရန်ရှာနေလျှင် Lego စုဆောင်းခြင်း, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ Lego အရောင်းအ၀ယ်သည် ကြီးကျယ်သော စျေးလျှော့မှုအချို့ကို ကောက်ယူရန် ပြီးပြည့်စုံသော အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ Lego ယခုနှစ်တွင် ရွေးချယ်ထားသော အစုံများအတွက် လျှော့စျေးများကို မြင်တွေ့ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း Group မှ အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် အချို့သောထုတ်ကုန်များတွင် ဆက်မလုပ်တော့ဘဲ၊ သို့မဟုတ် သီးသန့်စုစည်းမှုတစ်ခုအတွင်း ပရိုမိုးရှင်းပုံစံတစ်ခုရှိလျှင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ယမန်နှစ်က ပုံမှန်စျေးနှုန်းထက် ကြီးမားသော ချွေတာမှုကို ပေးစွမ်းသည့် အတွဲအမြောက်အများကို 20% လျှော့ချခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက်မှ ရေပန်းအစားဆုံးတစ်ခုမှာ 10220 Volkswagen က T1 ကို Camper ဗန်, လည်းပဲ ၇၅၂၄၄ Tantive IV နှင့် 853967 သစ်သား Minifigure.
ကြီးမြတ်မှုအချို့လည်းရှိခဲ့သည် အမေဇုံ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ အပေးအယူ Legoယမန်နှစ်ကဈေးဝယ်ထွက်ပွဲနှင့်အတူ ၃၄% အထိကြီးမားသောလျှော့စျေးများကိုပေးအပ်သည် Lego Art နှင့် Hidden Side အစုံ။ ယခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလားတူလျှော့စျေးအဆင့်များကိုမျှော်လင့်သည် Lego အကောင်းဆုံးအချို့ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်အဖွဲ့ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ UK လက်လီရောင်းချသူများ ကမ်းလှမ်းထားသော သဘောတူညီချက်များ။
ခေါင်းစီးလက်ဆောင်-ဝယ်-အတွဲ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ £200/$200/€200 အကုန်အကျခံကာ သီးသန့် Fleece Blanket ဖြစ်ပါမည်။ အကယ်၍ 40483 Luke Skywalker's Lightsaber ၏ အထောက်အပံ့များသည် p ဖြစ်သည်artပေါများလှသည်၊ ထို freebie ကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသေးသည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ဝယ်ယူမှုအားလုံးနှင့်အတူ 75313 ကို AT-ATသို့သော် ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ လက်ဆောင်နှင့် ကြီးမားသောအသစ် နှစ်မျိုးလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နေပါသည်။ Lego Star Wars အလွန်လျင်မြန်စွာ ရောင်းထုတ်ရန် စီစဉ်နေသည်။ Black ကသောကြာနေ့.
LEGO VIP ဆုကြေးငွေများ
VIP ထီဆုမဲ နှစ်ခုသည် နေရာအနှံ့ လည်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။ Black ကသောကြာနေ့ နှင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ 2021 ခုနှစ်ကာလ- ကြီးမားသော Bonsai Tree အတွက် တစ်ခုနှင့် VIP အမှတ် 1,000,000 အတွက် နောက်တစ်ခု။ ၎င်းသည် £6,250 / $7,692 / €6,667 ဆုဘောက်ချာများနှင့်ညီမျှသည်၊ ၎င်းသည် အခြေခံအားဖြင့် သင်၏ Lego နောက်နှစ် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ်အတွက် ဘတ်ဂျက် အကျုံးဝင်သည်။
လျှော့စျေး LEGO VIP ဆုလက်ဆောင်ဘောက်ချာများ
တစ်ရက်သာလျှင်၊ Lego အဖွဲ့သည် 'တံခါးပေါက်' ပရိုမိုးရှင်းဟု ခေါ်သည်- £5 ဆုဘောက်ချာများကို ပုံမှန်အမှတ် 560 အစား အမှတ် 800 သာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်ရထားသော နှစ်ဆ VIP အမှတ်များအားလုံးကို ဆိုလိုသည်။ Lego VIP တနင်္ဂနွေ ဒီထက်နည်းနည်းပိုသွားမယ်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့...
VIP အမှတ်နှစ်ဆကို သီးသန့်ထားချိန်တွင် Lego VIP တနင်္ဂနွေ, အကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခု ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ မနှစ်က အပေးအယူတွေ တွေ့တယ်။ Lego အဖွဲ့လိုက်ဈေးထက်ဝက်လျှော့ပေးသည် Lego VIP လျှော့စျေးဘောက်ချာများ။ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားသူများအတွက်အထူးသင့်တော်သည် Lego VIP ရမှတ်များ၊ အမှတ် 20 မျှသာရှိသော ပေါင် 1,600 လျှော့စျေးဘောက်ချာကို သင် ကောက်ယူနိုင်ပြီး ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ဝက်မှာ £10 ဘောက်ချာကို ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ညီမျှသည်။
ယခုနှစ်တွင်၊ သင်သည် ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ဝက်မဟုတ်သော5£560 လျှော့စျေးဘောက်ချာကိုသင်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ဝက်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ပုံမှန်စျေးနှုန်း 800 မှတ်ထက်စျေးသက်သာနေသေးသည်။
LEGO သည် ၂၀၂၂ တွင်စျေးနှုန်းတက်သည်
တစ်ဦး၏အဆိုအရ တာဝန်ရှိသူတဦးကကြေညာချက် မှ Lego ကုမ္ပဏီက၎င်း၏ယူရိုစျေးနှုန်းကိုတိုက်ကြီးတစ်လျှောက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသောကြောင့်အချို့အုပ်စုများ၏စျေးနှုန်းသည် ၂၀၂၂ တွင်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်။ မည်သည့်အုပ်စုများကိုထိခိုက်စေမည်ဟူသောတိကျသောအဖြေမရှိသော်လည်း၊ ကောလာဟလသတင်းများ StoneWars မှပါဝင်သောအကြောင်းအရာများပါဝင်သည် Star Wars, Marvel နှင့် ဖန်ဆင်းရှင်သည် ရောနှောနေလိမ့်မည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ထို့ကြောင့် စျေးနှုန်းမတက်မီ ထို sets များထဲမှ တစ်ခုခုကို ဖမ်းဆုပ်ရန် ပြီးပြည့်စုံသော အခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်သည် - အထူးသဖြင့် သင်သည် VIP အမှတ်နှစ်ဆနှင့် ဝယ်ယူမှုလက်ဆောင်များ တစ်ချိန်တည်းတွင် ရရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Zavvi ဒီလိုဖြစ်ရမယ့်နေရာပါ။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့p ပြီးပြီ၊artတတိယ-p နှင့် သီးသန့် neredarty လက်လီရောင်းချသူယူဆောင်လာ Brick Fanatics စာဖတ်သူများသည် အကောင်းဆုံးအချို့ကို ကမ်းလှမ်းမှုများကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ Lego ပတ်ပတ်လည်အစုံ။ ထံမှ နောက်ထပ် လျှော့စျေးများကို ကြည့်လိုက်ပါ။ Zavvi နိုဝင်ဘာလတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့.
Lego Star Wars Cyber ​​Monday အပေးအယူ
ဟူသောအချက်ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိပါ Lego Star Wars စုဆောင်းမှုတွင်ပတ် ၀ န်းကျင်၌တန်ဖိုးအကြီးဆုံးတည်ဆောက်မှုအချို့ပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်ထောင်ချီသောဤကျယ်ပြန့်သောအစုံများသည်အသစ်စက်စက်အသစ်များကဲ့သို့ဖြစ်သည် 75309 သမ္မတနိုင်ငံ Gunship -ရုတ်တရက် ပိုရလာနိုင်တယ်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ extravaganza ပါ။ အပိုဆု VIP အမှတ်များမှအခမဲ့လက်ဆောင်များနှင့်လျှော့စျေးများသို့၎င်းသည်၎င်းကိုထုတ်ပစ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်လေ့ရှိသည် Lego Star Wars မင်းအိပ်မက်မက်နေတာတွေကိုသတ်မှတ်ပါ။
ပိုကောင်းသေးတယ်၊ Lego အုပ်စုရှိပါတယ် ယခုအတည်ပြုခဲ့သည် အများကြီး မျှော်လင့်ထားပြီး ကောလဟာလတွေ အများကြီး ထွက်နေပါတယ်။ 75313 ကို AT-AT အပေါ်မှာ ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ Black ကသောကြာနေ့-ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ပိတ်ရက် ယနေ့အထိ Imperial Walker ၏ အကြီးမားဆုံး လူ့ဇာတိခံအဖြစ်၊ ၎င်းသည် ယခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိရန် စီစဉ်ထားသော ဒုတိယမြောက် Ultimate Collector Series ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ မစောင့်နိုင်တော့ပေ။ အစုံကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွင်းကျကျ သုံးသပ်ချက်ကို ကြည့်ပါ။ ဒီမှာ.
ဒီလစဉ်ထုတ် မဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။ Lego သင့်လက်ထဲတွင် စကားလုံးများ၊ သုံးသပ်ချက်များ၊ သတင်းဖော်ပြမှုနှင့် အင်္ဂါရပ်များအကြောင်း ထူးခြားသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ပေးဆောင်သည်။ Lego သတ်မှတ်ချက်များ၊ နည်းပညာများတည်ဆောက်ခြင်း၊ ပရောဂျက်များနှင့် အခြားအရာများ။ နှစ်နှစ်စာရင်းသွင်းမှ ထုတ်ယူပါ။ Blocks မဂ္ဂဇင်း နေစဉ်အတွင်း ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ကုဒ်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ အခမဲ့တီရှပ်နှင့် ရုပ်ပုံအသေးစားတစ်ခုကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ BFT/F. ဒီဇင်ဘာ 23 ရက်မတိုင်မီ စာရင်းသွင်းသူတိုင်းကိုလည်း ပေါင် 1,000 ဖြင့် မဲနှိုက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ Lego လက်ဆောင်ကဒ်။
စိတ်ကြိုက် minifigures ပါလျှင်, parts နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်သင်၏ယို၊ FireStar ကစားစရာများ မင်းရှာနေတာတွေရှိတယ်။ ထံမှ Star Wars-Squid Game အသေးစားရုပ်ပုံများ (Squid Game၊ သင်ကြားဖူးကောင်းထင်ပါသလား)၊ သင့်လက်ရှိအဆင့်မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ Lego ကုဒ် BF10 ကို အသုံးပြု၍ စုဆောင်းမှု နှင့် အားလုံးကို 10% လျှော့စျေးဖြင့် ပြုလုပ်ပါ။
အီးနည်းနည်းထည့်ဖို့ ရှာနေတယ်။xtra သင့်အား ထွန်းလင်းစေပါ။ Lego သတ်မှတ်ထားပေမယ့် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ မရဘူးလား? ငါ့အုတ်များကိုလင်းစေပါ' one-stop lighting kits များကို တတ်နိုင်သမျှ ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာ တပ်ဆင်နိုင်စေရန် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပြီး လိုက်နာရလွယ်ကူသော ညွှန်ကြားချက်များ အပြည့်အစုံပါရှိပါသည်။ အားလုံး ငါ့အုတ်များကိုလင်းစေပါLighting kit များအတွက် 25% လျှော့စျေးရှိပါသည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ သီးသန့်လျှော့စျေးကုဒ်ကို အသုံးပြု၍ နောက်ထပ် 5% လျှော့စျေး ရယူနိုင်ပါသည်။ BF5.
Lego sets များသည် ပုံသဏ္ဍာန် နှင့် အရွယ်အစား အားလုံး ပါ၀င်သည် iDisplayit၏ကျယ်ပြန့်သော display stands နှင့် display case များ။ သင်အနှစ်သက်ဆုံး သေးငယ်သောအစုံများကို ပြသရန်နည်းလမ်းကို သင်ရှာနေသည်ဖြစ်စေ၊ 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon, iDisplayit အဖြေရှိပါတယ် - အားလုံးအပေါ် 10% ချွေတာနိုင်ပါတယ်။ Lego Star Wars အမှုတွဲများကိုပြသပြီး ကုဒ်ဖြင့်ရပ်တည်သည်။ BFSW10 ဘို့ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့. ထို့အပြင် £99/$135 အထက်မှာယူမှုအားလုံးသည် အခမဲ့ 12-အသေးစားပြကွက်တစ်ခုအတွက် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။
LEGO Harry Potter Cyber ​​Monday အပေးအယူများ
အဆိုပါတစ်ဦးအဖြစ် Lego ၂၀၁၈ ခုနှစ်ပြန်လာကတည်းကအဖွဲ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးနဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံး၊ ဟယ်ရီပေါ်တာ အစုံအပါအ ၀ င်အစုံများကြောင့်လူကြီးများတွင်ပင်မယုံနိုင်လောက်အောင်နာမည်ကြီးသည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts ရဲတိုက်, 75978 ထောင့်ဖြတ် Alleyနှင့်ယခုနှစ်အတွက်အသစ်ထုတ်ဝေသော ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု.
အဲဒီထဲကတစ်ခုခုရှိရင်ငါတို့လကိုကျော်လိမ့်မယ် ဟယ်ရီပေါ်တာ Lego sets တွေအတွက် discount တစ်ခုတွေ့တယ်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ကောင်လေး မှော်ဆရာ ပတ်ပတ်လည်တွင် အခြေခံ၍ အခြားသော ပူဇော်သက္ကာများနှင့်အတူ၊ နွေရာသီရဲ့ နှစ် 20 ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အကွာအဝေးကို လျှော့ထားရင် ဒါမှမဟုတ် သင့် modular Hogw မှာ ထည့်နိုင်ရင် အတော်လေးကို တစ်ခုခုဖြစ်မှာပါ။arts display သို့မဟုတ်ရွှေ minifigure စုဆောင်းမှုကိုလျှော့စျေးဖြင့်
LEGO Millennium Falcon Cyber ​​Monday သဘောတူညီချက်များ
ကြယ်တာရာကိုယုံကြည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကြောင်းပြချက်အသီးသီးရှိသည် 75192 ထောင်စုနှစ် Falcon key p ကျန်ပါလိမ့်မယ်art ၏ Lego Star Wars 2022 ခုနှစ်တွင်စုဆောင်းမှု။ မဟုတ်ပါက၊ ၎င်းသည်ကြီးမားသောနောက်ကွယ်မှအငြိမ်းစားယူခြင်းသို့ပို့ခံရမည့်အခွင့်အလမ်းအလွန်မြင့်မားသည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ လျှော့ချမှုများ။ အဲဒီလိုမဟုတ်ရင်တောင်မှ အထင်ကရ အစုံက ငါတို့ရဲ့ စုစည်းမှုမှာ မထည့်ရသေးတဲ့ သူတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ မက်လုံးတစ်မျိုးမျိုး ဆွဲဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။ သင်၏ VIP အမှတ်များ ထူထောင်ရန် အခွင့်အလမ်းက ဝယ်ယူမှုကို တရားမျှတစေရန် လုံလောက်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
LEGO Mandalorian Cyber ​​Monday အပေးအယူများ
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သည်အလွန်ကြီးမားခဲ့သည် Lego နှင့် Star Warsဖြေ။ 75292 အဆိုပါ Mandalorian Bounty Hunter သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး p ရတယ်arty start၂၀၂၀ ၏နောက်ကျောဘက်သို့ ဦး တည်။ ၎င်းသည်ထိုအချိန်မှ စ၍ မရပ်မနားဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတို့ကပေးနေတာ 75254 ကို AT-ST Raider ကို အကောင်းဆုံးကို ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ဒီနှစ်လျှော့စျေးများ။
Lego Marvel / LEGO Avengers Cyber ​​Monday အပေးအယူများ
အဆိုပါ Lego Marvel စကြာဝာသည်ယခုအချိန်တွင်လုပ်ဆောင်စရာအချက်အချာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောတည်ဆောက်နိုင်သောအစုံများအပြင်ရုပ်ရှင်များ၊ ဂိမ်းများနှင့်ပဲမျိုးစုံပြိုင်ပွဲများကိုပြင်ဆင်ခြင်းပြက္ခဒိန်များရှိသည်။ မနှစ်ကပေါ့ Lego ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ပွဲစဥ်တွင် လျှော့စျေး အများဆုံးတွေ့ခဲ့သည်။ Marvel နှင့် Avengers အစုံများအပါအ ၀ င် Venom Mech vs. 76150 Spiderjet, Mysterio ၏ 76149 အဆိုပါဆိုထားပါသည် Iron Man သံချပ်ကာခန်းမ ၇၆၁၂၅ ၂၀၂၁ သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည်။
LEGO NINJAGO Cyber ​​Monday အပေးအယူများ
၁၀ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများနှင့်အတူယခုလက်ရှိထိပါးနေသည် Ninjago မီးမောင်းထိုးပြရာတွင်၊ စုစည်းမှုသည် ယခုနှစ်၏ဗဟိုချက်ဖြစ်နိုင်သည့် အခွင့်အရေးတိုင်းရှိသည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ အဖြစ်အပျက်။ လျှော့စျေးအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်ချင်ပါသည်။ ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ်ဤသည်သည်လည်းလတ်တလောအားသာချက်ယူရန်အချိန်လည်းဖြစ်နိုင်သည် Ninjago မယုံနိုင်လောက်အောင် 71738 Zane's Titan Mech Battle နှင့်အံ့သြဖွယ်တောက်ပမှုတို့အပါအ ၀ င်အမွေအနှစ်များ 71742 Overlord နဂါး.
Lego Batman Cyber ​​Monday အပေးအယူ
Lego DC ယခုနှစ်တွင် ကြီးမားသော ပရိုမိုးရှင်းများ၏ ဘာသာရပ်မဟုတ်သေးသော်လည်း အချို့သော အဟောင်းများကို ဆွဲဆောင်မှုရှိသော လူကြိုက်များခြင်း၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ အပေးအယူ။ အဲဒီအထဲမှာ ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile, နှင့် Lego အုပ်စုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူခြင်းမပြုမီကျန်ရှိသည့်စတော့များကိုရောင်းချရန်အလားအလာရှိသောအုပ်စုဖြစ်သည်။
LEGO Super Mario Cyber ​​Monday အပေးအယူများ
အဆိုပါ Lego အုပ်စုသည်လျှော့စျေးများကိုကမ်းလှမ်းရန်တွန့်ဆုတ်နေခဲ့သည် Lego စူပါမာရီယို, တတိယ -p နှင့်အတူarty လက်လီရောင်းချသူများသည် ဆောင်ပုဒ်ပေါ်ရှိ ဈေးဆစ်မှုတစ်ခုရယူရန်အတွက် များသောအားဖြင့် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ အဖြစ်အပျက်သည် ဤအချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲမှုကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အားeအချို့ကို တည်ဆောက်နိုင်စေမည့် အလားအလာရှိသည်။xtra Lego VIP အမှတ်များနှင့်တစ်ချိန်တည်း ၀ ယ်ယူနိုင်သောလက်ဆောင်အချို့အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီပါစေ။
Lego Jurassic World Cyber ​​Monday အပေးအယူ
မကြာသေးမီကထုတ်ဝေလိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောအစုံဖြစ်သည် 76940 T. rex Dinosaur ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းပြပွဲ နှင့် 76939 Stygimoloch Dinosaur ထွက်ပေါက်၊ ဒါဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့တယ် Lego Jurassic World။ အဆိုပါ 2021 Lego ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ပွဲက ကျွန်တော်တို့ကို မျက်နှာသစ်တွေ ခေါ်ယူဖို့ အခွင့်အရေးပေးနိုင်ပါတယ်။ Jurassic World minifigure အကွာအဝေး၊ သို့ boost ကျွန်ုပ်တို့၏ VIP အမှတ်များ
LEGO Technic Cyber ​​Monday အပေးအယူများ
၎င်းသည်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည် Lego နည်းပညာ နှောင်းပိုင်း။ 421294×4Mercedes-Benz Zetros Trial Truck နှင့် 42128 အကြီးစား - Tow Truck ကား ၂၀၂၀ ၏တောက်ပသောထပ်တိုးမှုများသည်အသစ်များဖြစ်သည် Lego ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ကမ်းလှမ်းချက်များသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော စုဆောင်းငွေများကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ 42098 ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, 42082 Rough Terrain Crane နှင့် 42097 Compact Crawler ချီစက်မရ။ မျှော်လင့်ပါတယ် Lego ဤအင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည်ဤတည်ဆောက်သူအတွက်အဆင်ပြေစေသောဆောင်ပုဒ်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစုဆောင်းငွေအချို့ကိုစုဆောင်းပါ။
Lego Friends Cyber ​​Monday အပေးအယူ
ဒီနွေရာသီမှာ ၁၈ ယောက်လွှတ်တာတွေ့တယ် အသစ်အစုံ, ချမှတ်ခြင်း Lego Friends လက်ရှိဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခု မနှစ်က, 41337 ရေအောက် Loop နှင့် 41433 P ကိုarty လှေ လျှော့စျေးများထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့၊ နှင့် 2021 တွင် ဤအခင်းအကျင်းအပေါ် ပိုမိုအာရုံစိုက်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ Lego အုပ်စုသည်ဤကဲ့သို့သောလျှော့စျေးအစုံထက်များစွာပိုဆိုးသွားနိုင်သည် 41693 Surfer ကမ်းခြေ, 41685 မှော် Funfair Roller Coaster နှင့် 41441 မြင်းသင်တန်းနှင့်နောက်တွဲယာဉ်.
Lego CITY Cyber ​​Monday အပေးအယူ
2020 ၏ စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံး စုစည်းမှုတစ်ခုအဖြစ် ပြီးသွားပါပြီ။ Black ကသောကြာနေ့-ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့, Lego CITY ဤအချိန်အခါကိုစောင့်ကြည့်ရန်အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းဖမ်းယူသည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေ 60233 Donut ဆိုင်ဖွင့်လှစ် နှင့် 60197 ခရီးသည်ရထား ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က, 60307 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း နှင့် 60266 သမုဒ္ဒရာရှာဖွေရေးသင်္ဘော ၂၀၂၁ မှာငါတို့သိမ်းဖို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူးနှစ်စုံဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Lego CITY ကမ်းလှမ်းချက်များသည်နှစ်ဆကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် Lego VIP အမှတ်တွေ ကျော်သွားပြီ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့.
LEGO Minecraft Cyber ​​Monday အပေးအယူများ
နာမည်ကြီးဗီဒီယိုဂိမ်းမှလှုံ့ဆော်မှု၊ Lego Minecraft တကယ်တော့မင်းထင်တာထက်နောက်လိုက်ပိုကြီးတာတစ်ခုရှိတယ်။ ဟိ Lego အဖွဲ့သည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအချို့ဖြင့် ဤလမ်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လိုက်နိုင်သည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ အပေးအယူ၊ 21152 The Pirate သင်္ဘောစွန့်စားမှု နှင့် 21151 အဆုံးတိုက်ပွဲ အားကောင်းသည့်လျှော့စျေးများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောအငြိမ်းစားယူရန်နှစ်စုံ
LEGO သည် Cyber ​​Monday အပေးအယူလုပ်သလား။
မှန်ပါသည်, Lego အဖွဲ့ကမ်းလှမ်းမှုများ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ p အဖြစ် အပေးအယူart ပိုကျယ်တယ်။ Black ကသောကြာနေ့ စျေးဝယ်ပွဲ။ ယခင်နှစ်များက ယင်းတို့သည် ဆက်လက်ပါဝင်ခဲ့သည်။ Black ကသောကြာနေ့ လျှော့စျေးများမှတဆင့် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့; သီးသန့် တစ်ရက်တာ လျှော့စျေးများ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ သာလျှင်; နှင့် 2020 တွင် စျေးသက်သာသော VIP ဘောက်ချာများပင်။ ထိုကမ်းလှမ်းချက်များ၊ လျှော့စျေးများနှင့် လက်ဆောင်များပါရှိသော မည်သည်နှင့်မဆို 2021 ခုနှစ်အတွက် ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒီနှစ်, ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်မှာ ကျရောက်ပါတယ်။ အမြဲလိုလို၊ အဲဒါက နောက်သုံးရက်ပါ။ Black ကသောကြာနေ့ - ဆိုလိုသည်မှာ၊ Lego အုပ်စုလိုက်ဈေးဝယ်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာ ၂၆ မှနိုဝင်ဘာ ၂၉ အထိအားလုံးပါဝင်နိုင်လိမ့်မည်။
Cyber ​​Monday တွင်မည်သည့် LEGO ကိုရောင်းသနည်း။
ဘယ်ဟာကိုအတိအကျခန့်မှန်းရခက်တယ် Lego အတွဲများကို ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ 2021၊ သို့သော်ယခင်နှစ်များတွင်လျှော့စျေးအစုံများသည် gamut မှလည်ပတ်သည်။ Star Wars နှင့် Lego Art သို့ CITY နှင့် Hidden Sideမရ။ အငြိမ်းစားယူခြင်းများသည်မကြာခဏလျှော့စျေးတစ်မျိုးမျိုးအတွက်စိတ်ချရသောကစားနည်းဖြစ်သည် LEGO ထုတ်ကုန်များ၏နောက်ဆုံးစာရင်းသည် ၂၀၂၁ တွင်စင်ပေါ်မှထွက်ခွာသည် ဒီနှစ်အတွက်ဘာကမ်းလှမ်းချက်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးအတွက်
Cyber ​​Monday သည် Black Friday ထက် LEGO အပေးအယူပိုကောင်းမည်လား။
စဉ် ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ အပေးအယူအားဖြင့် LEGO.com အများအားဖြင့် ဆက်စပ်မှုတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ Black ကသောကြာနေ့ အပေးအယူများ၊ Lego Group သည် ရံဖန်ရံခါ သီးသန့်ပေးချေမှုများကို ကမ်းလှမ်းသည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ ဒီနှစ်အတွက် စောင့်ရတာ တန်တယ်လို့ သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ 2019 ခုနှစ်တွင်၊ Lego Group သည် တစ်ရက်တည်း ပွဲထွက်ခဲ့သည်။ ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ 10257 Carousel နှင့် Carousel အပါအဝင် sets များအတွက် သဘောတူညီမှုများ 21315 Pop-Up စာအုပ်နှင့် ၂၀၂၀ တွင်၎င်းသည် VIP အမှတ်များအတွက်ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်ထက်ဝက်အတွက် VIP လျှော့စျေးဘောက်ချာများပေးခဲ့သည်။
ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ Lego ဒါကြောင့်လာမယ့်သီတင်းပတ်တွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုမင်းသေချာပြန်စစ်ကြည့်ပါ။ အစောပိုင်းငှက်ကမ်းလှမ်းချက်များမှနောက်ဆုံးမိနစ်ဈေးလျှော့ချိန်အထိစိတ်လှုပ်ရှားစရာများစွာရှိလိမ့်မည် Lego ဆိုက်ဘာတနင်္လာနေ့ သင့်သွားများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီဖြစ်စေရန် သဘောတူညီချက်များ boostသင်၏ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းမှု (သို့) ချစ်ရသူတစ် ဦး ဦး ကိုဖြစ်စေ